सरी, सेयर ‘लगानीकर्ता’ ! – BikashNews
२०७८ साउन ६ गते १५:१२ शिव सत्याल
काठमाडौं । २०७७ सालको बैशाख ३० गते पुँजी बजार मापक नेप्से परिसुचक १२२१.३१ विन्दुमा थियो । हिजो (साउन ५ गते) परिसुचक २९८५.५७ विन्दुमा छ ।
सोझो हिसावले हेर्दा यो अवधिमा सेयरधनीको सम्पत्ति १४४.४६ प्रतिशतले बढेछ । यति मात्रै होइन, गत माघमा चन्द्रागिरी हिल्समा १ सय रुपैयाँ लगानी गर्नेहरुको सम्पत्ति बढेर हिजो १५ सय १८ रुपैयाँ भएको छ ।
यो कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्नेहरुको सम्पत्ति कति प्रतिशतले बढ्यो वा कति कमाएछन् भन्ने हिसाव आफै गर्नुहोला ।
अर्काे एउटा पनि उदाहरण दिऊँ – ३० वैशाख २०७७ मा गोर्खाज फाइनान्सको सेयर प्रतिकित्ता ११३ रुपैयाँ थियो । हिजो गोर्खाजको सेयर प्रतिकित्ता ११७५ रुपैयाँ छ । गत चैत मसान्तको वित्तीय विवरण अनुसार गोर्खाजको ईपीएस ४२.०५ छ । अर्थात, ११७५ रुपैयाँ लगानी गर्यो भने ४२ रुपैयाँ ५ पैसा कमाएकाे सेयर प्राप्त हुन्छ । यो भनेका ३.५८ प्रतिशत हो । दोस्रो बजारको बजार अवसर (मार्केट अपरच्युनिटी) लाई गौण मान्ने हो भने गोर्खाजको सेयरमा पाइने भनेको ३.५८ प्रतिशत न हो । अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्दा योभन्दा बढी प्रतिफल पाइन्छ कि पाइदैन होला ?
गत चैत मसान्तमा ११.८१ प्रतिशतले ऋणात्मक ईपीएस रहेको चन्द्रागिरी हिल्सको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १५ सय १८ रुपैयाँ छ । एक कित्ता सेयर किन्दा ११ रुपैयाँ ८१ पैसा नोक्सान हुने चन्द्रागिरीको सेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण किन छ ?
आँखुखोला जलविद्युत कम्पनीको ईपीएस १३ रुपैयाँ ८९ पैसाले ऋणात्मक छ । अर्थात सो कम्पनीको एक कित्ता सेयर तपाईंसँग छ भने त्यसले कमाएर एक रुपैयाँ पनि दिँदैन, उल्टै प्रतिकित्ता १३ रुपैयाँ ८९ पैसा नोक्सान हुन्छ । यही कम्पनीको सेयर हिजो दोस्रो बजारमा प्रतिकित्ता २९१ रुपैयाँमा खरिद विक्री भयो । सय रुपैयाँमा किन्दा पनि नोक्सानी हुने कम्पनीको सेयर मूल्य ३ सय रुपैयाँको हाराहारीमा किन यति लुछाचुडी भइरहेको छ ?
दोस्रो बजारका ‘सर्वसाधारण लगानीकर्ता’को जस्तै गरी म पनि नेप्से परिसुचक १२ सयबाट बढेर ३ हजारको हाराहारीमा पुग्दा वा दैनिक २० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा कारोबार हुँदा बजार अस्वभाविक भयो वा धेरै बढ्यो भनेर मान्दिनँ । तर, तपाईं ‘सर्वसाधारण लगानीकर्ता’ केही कम्पनीको सेयर जुन मूल्यमा उठाइरहनु भएको छ, त्यसमा मेरो शंका छ । यहाँनेर केही न केही गलत भइरहेको छ । प्रतिफलले केही हदसम्म भएपनि ‘जस्टिफाइ’ गर्ने र लामो समय पाल्दा राम्रो प्रतिफल दिने कम्पनी छोडेर ‘झण्डु’ कम्पनीतिर बढेको आकर्षणले शंकालाई थप बल पुर्याएको छ ।
मलाई थाहा छ– यो लेख पढेपछि तपाई ‘सर्वसाधारण लगानीकर्ता’ मसँग रुष्ट हुनुहुनेछ । बाटो हिँड्दा मलाई चिन्नुभयो भने चड्कन लगाउन खोज्नु हुनेछ । बजार घटाएर हाम्रो सम्पत्ति सस्तोमा किन्नको लागि यसले मिडियाको दुरुपयोग गरेछ भन्नुहुनेछ । तर, सरी सेयर ‘लगानीकर्ता !’ यो स्वभाविक बजारमा अस्वभाविक गतिविधिको मात्रा तपाईंको अनुमानभन्दा निकै धेरै भइरहेको छ । आज तपाईंले कमाएको केही हजारले भोलिका लागि केही लाख गुमाउनु पर्ने वाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गर्दैछ ।
यति लेख्दै गर्दा म दुई जना ब्रोकरले मसँग अनौपचारिक रुपमा व्यक्त गरेको धारणा यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु ।
अघिल्लो साताको सुरुतिर नाम चलेको एक सेयर ब्रोकर कम्पनीका संचालकसँग भेट भएको थियो । उनले मसँग भनेको कुरा उनकै शब्दमा राखौं है–
कोरोनाको पहिलो लहर चलेदेखि नै नेपालमा पैसाको मुख देख्ने समुह ज्यादै सानो छ । सेयर बजार, मेडिकल उपकरण तथा औषधी र अनलाइन मिटिङदेखि पढाइसम्मको अभ्यास भएकोले विद्युतीय सामाग्रीको व्यापार गर्नेहरुले मात्रै पैसाको मुख देखेका छन् । निजी क्षेत्रमा जागिर गर्नेहरु कतिको तलब र तलब नघटेपनि बोनस घटेको छ । उद्योग बन्द छ । अधिकांश बस्तुको व्यापार कम भएको छ । उत्पादित बस्तुको वितरण संजाल विग्रदा कृषि उपजको अवस्था पनि दयनीय भएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा पनि समस्या देखिएको छ ।
उद्योग व्यवसाय गर्ने भनेको बैंक वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण लिएर नै हो । ऋण लिनेको व्यवसाय चलेको छैन, उनीहरु समस्या छन् । तर, बैंकहरुमा खराब कर्जा त्यति बढेको छैन । बैंकहरुको नाफा खासै घटेको छैन । यो किन भइरहेको छ भने ऋण लिएकाहरुले विगतमा कमाएको पैसाबाट ऋण तिरे । ऋणको किस्ता र व्याज तिर्न नसक्नेहरुलाई राष्ट्र बैंकले पछि तिर्दा पनि हुने गरी सहुलियत दियो ।
अब राष्ट्र बैंकले यसरी धेरै दिन सहुलियत दिन सक्दैन । राष्ट्र बैंकको ‘ग्रिन सिग्नल’ पाउने बित्तिकै बैंकहरुले किस्ता र व्याज असुलीमा ताकेता गर्छन् । बैंकहरुले ताकेता गर्दा पनि ऋण तिर्न नसक्नेहरुको धितो लिलामी प्रक्रिया सुरु हुन्छ । यो दुई वर्षमा लकडाउन र निषेधाज्ञाको कारणले जति महिना सरकारले जनतालाई थुनेर राखेको छ, त्यसको परिणाम देखिएकै छैन । अब देखिन्छ । दैनिक पत्रिकाका पानाहरु धितो लिलामीको विज्ञापनले भरिने छन् । धितो लिलामीका सुचना प्रकाशित गर्नको लागि दैनिक पत्रिकाका पानाहरु थपिन्छन् होला ।
उनले थप व्याख्या गर्दै भनेका थिए– अहिले सेयर बजारमा बढी लगानी गर्ने भनेका उद्योग व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरु नै हुन् । उनीहरु आफ्नो धितो लिलामीबाट बचाउनको लागि सस्तोमा भएपनि सेयर बेच्न तयार हुनेछन् । साना लगानीकर्ताले बढेको बजारमा सेयर किन्न सक्छ तर, घट्दो बजारम सेयर बेच्न सक्दैन । किनभने कसैले कुनै कम्पनीको सेयर ३ सय रुपैयाँमा किनेको छ र घटेर २७० रुपैयाँ आयो भने भोलि बढ्छ कि भनेर उसले बेच्दैन । तर, भोलि पनि १० प्रतिशतले नै घटेर २४३ रुपैयाँमा आउन सक्छ । दुई दिनमै ५७ रुपैयाँ गुमाइसक्छ । यति धेरै गुम्यो भनेर ऊ अझै कुर्छ । तर, मूल्य झन् घट्न सक्छ । यही ठाउँमा ठूला लगानीकर्ताले भने २७० रुपैयाँ आउने बित्तिकै बेचेर थप नोक्सानी हुने अवस्थाबाट जोगिन्छ । दोस्रो बजारको चरित्र नै यस्तै हुन्छ ।
यही साताको सुरुतिर अर्का एक नाम चलेका सेयर ब्रोकरसँग भेटघाट भएको थियो । उनले अर्काे डरलाग्दो विषय सुनाएका थिए । उनको कुरा यस्तो थियो–
आम मानिसले जसलाई सेयर बजारका ठूला लगानीकर्ता भनेर अहिले चिनिरहेका छन्, तिनीहरु ज्यादै साना लगानीकर्ता भइसकेका छन् । अहिले बजारमा ठूला लगानीकर्ता जो जो छन्, तिनीहरुलाई मिडियाले पनि चिनिरहेका छैनन् । उनीहरु अर्कै काम गर्ने कम्पनीको कार्यालयमा १२–१५ जना सिएहरु राखेर दैनिक सेयर बजारमा खेलिरहेका छन् । पुँजी बजारको नियामक निकायका अधिकारीहरु पनि साँझतिर त्यो कम्पनीमा पुग्छन् । सेयर कारोबार हुने प्लेटफर्मका प्राविधिकहरु पनि त्यतै भेटिन्छन् । बैंकहरु पनि त्यही हुन्छन् ।
कुनै व्यक्तिले कुनै कम्पनीको सेयर किन्यो वा बेच्यो भने यी नयाँ ठूला लगानीकर्ताले तत्कालै जानकारी पाउँछन् । सेयर कारोबार गर्ने प्लेटर्फम कुनै निजी कम्पनीको नियन्त्रणमा छ । एउटा समुहले गोर्खाज फाइनान्सको सेयर ३ सय रुपैयाँबाट बोकेर १४ सय रुपैयाँसम्म पुर्यो । अब त्यही समुह भन्दैछ कि यसको सेयर २५ सय रुपैयाँ पुर्याउने भनेर । यदि नियामकले प्रभावकारी रुपमा हेरिदिने हो भने नेपाली सेयर बजारमा कम्तिमा पनि ३ जना हर्षद मेहेता फेला परिसकेका हुन्थे ।
यी दुवै ब्रोकरको समान एउटा निक्र्योल थियो । उनीहरु भनिरहेका थिए– अबको केही समयपछि देशका ७७ वटै जिल्लामा सेयर पिडित संघ स्थापना हुनेछ । प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा सेयर पिडित संघका पदाधिकारी र सदस्यहरु धर्नामा हुनेछन् । आफूले खाइनखाई जोगाएको वा पुख्र्यौंली सम्पत्ति स्वाहा बनाइसकेर आन्दोलित भएकाहरुलाई कसले सम्झाउन सक्ला र ? सायद भदौ १६ व्यहोर्नको लागि हामीहरु तयार हुनुपर्छ ।
यी ब्रोकरले उदाहरण दिएको हर्षद मेहेता चिन्नुहुन्छ होला नि ! भारतीय सेयर बजारमा अहिलेसम्म फेला परेको सबैभन्दा ठूलो घोटला प्रकरणका पात्र हुन हर्षद मेहेता । उनले २ सय रुपैयाँको एसीसी (एसोसिएटेड सिमेन्ट कम्पनी) को मूल्य ९ हजार रुपैयाँ बनाएका थिए । बैंकहरुलाई प्रभावमा पारेर १५ दिनको लागि अनधिकृत रुपमा कर्जा लिएर बजारमा खेलोफड्को गर्ने उनको कार्य थियो । यो धेरै पहिलाको कुरा होइन । आजभन्दा करिब ३० वर्ष अगाडिको कुरा हो ।
अर्काे, भदौ १६ भनेको पनि बुझ्नुभयो होला । २०६१ साल भदौमा वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा इराक पुगेका १२ जना नेपालीको आतंकारी समुहले घाँटी रेटेर हत्या गरेको थियो । सो हत्याको विरोधमा २०६१ भदौ १६ गते स्वतस्फूर्त रुपमा नेपालमा हिंसात्मक प्रदर्शन भएको थियो । सो प्रदर्शनमा २९७ वटा मेनपावर कम्पनीमा आक्रमण भएको थियो भने ७५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको थियो । सोही दिन भएको आक्रमणको कारण तत्कालिन स्पेस टाइम दैनिक बन्द भएको थियो भने कान्तिपुर पब्लिकेसनको कार्यालयमा पनि आक्रमण भएको थियो ।
सेयर बजारमा लगानी नगर्नुस् भन्ने मेरो आग्रह होइन । लगानी गर्दा ध्यान दिएर लगानी गर्नुस् भन्ने सुझाव हो । अहिले दोस्रो बजारमा जे जस्ता कम्पनीको सेयरमा जुन प्रकारको खेलोफड्को चलिरहेको छ, त्यो लगानीकर्ताको हितमा छैन । मैले यस्तो भनिरहँदा पनि तपाईंलाई चित्त बुझिरहेको छैन होला, सरी ‘सेयर लगानीकर्ता’, आजको यथार्थ यही हो ।
One comment on "सरी, सेयर ‘लगानीकर्ता’ !"
Din dinai suicide news Sunna na paryos aaune bear market ma sadai bull hudaina bhanne Naya hos ya purano sable bujnechan. Yedi aajako price 70% ghatda pani tapailai keyi farak pardaina bhane balla lagani garnus juwa ghar nabanaunus.